Umatshini wokuhambisa umoya wombane webhasi abavelisi kunye nabanikezeli - China uMatshini oCoca umoya oCoca umoya
Uchungechunge lwe-ESA entsha yomoya webhasi yomoya luhlobo lophahla oluphakanyisiweyo lomoya, onendawo yokubuyela yomoya, kunye neemodeli ezahlukeneyo zokufaka iibhasi zombane ukusuka kwi-6m ukuya kwi-8m.
LMD uthotho lwamandla omoya omtsha webhasi luhlobo lophahla olufakelwe isixhobo sokupholisa, esinendawo yokubuyela yomoya, kunye neemodeli ezahlukeneyo zokufaka iibhasi zombane ukusuka kwi-8m ukuya kwi-12m. Uchungechunge lwe-LMD luxhasa iteknoloji eyahlukeneyo yokukhetha, njengeteknoloji yokulawula i-Cloud, i-high-voltage connection anti-loosening technology, iyunithi yephahla edibeneyo ye-battery ye-thermal system (BTMS), iteknoloji yokulawula i-thermal technology, i-DC750 iteknoloji ephezulu, Itekhnoloji yokunciphisa amanzi yokuNciphisa, itekhnoloji yokucoca umoya ngaphakathi kwebhasi kunye namandla okusindisa i-aluminium alloy compressor.
Nceda unxibelelane nathi kule sales@shsongz.cn ngeenkcukacha ezithe kratya.
Uluhlu lwe-ESD lomoya omtsha wamandla omoya luhlobo lophahla oluphakanyisiweyo lomoya, kunye neemodeli ezahlukeneyo zokufaka iibhasi zombane ukusuka kwi-8m ukuya kwi-12m. Uchungechunge lwe-ESD luxhasa itekhnoloji eyahlukeneyo yokuzikhethela, njengetekhnoloji yolawulo lwamafu, itekhnoloji yokulwa nokukhulula amandla ombane, iyunithi yophahla oluhlanganisiweyo lwetekhnoloji yolawulo lobushushu bhetri (BTMS), itekhnoloji yolawulo lobushushu bezithuthi, itekhnoloji ye-DC750 yombane, Itekhnoloji yokunciphisa amanzi yokuCoca amanzi, itekhnoloji yokucoca umoya ngaphakathi kwebhasi kunye nesiguquli sombane esonga umbane wealuminium.